CPJ fi 'Amnesty International' Itoophiyaa akeekkachiisan - BBC News Afaan Oromoo
CPJ fi 'Amnesty International' Itoophiyaa akeekkachiisan
Image copyright CPJ
​​​Dhaabbileen mirga gaazexeessitootaaf falman akka CPJ fi 'Amnesty International' ibsa Kibxata baasaniin mootummaan Itoophiyaa hatattamaan gaazexeessitoota hidhaman akka gadi dhiisuu gaafatan.
Torbe darbe keessa gaazexeessitoonni lama qabamuufi itti aansee ammoo Raayyaan Ittisa Biyyaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee "raayyaa ittisaa fi uummata gidduu wal amantaan akka hin jirre uuman nan himadha" jechuun ibsa baasuun yaaddessaadha jedhan.
Gulaalaa olaanaa Asrat TV fi gaazexaa Bararaa kan ta'e Berihuun Adaanee fi Gulaalaa Barruu Inquu jedhamtu kan bara 2014 hojii dhaabde kan ta'e Eliyaas Gabruu gazexeessitoota dhaabbileen kunneen hidhaman jedhanidha.
Mootummaan garuu namoota kana hojii gaazexeessummaan wal qabateen osoo hin taane, 'yaalii fonqolcha mootummaa' torbee lama dura raawwatameera jedheen shakkee to'annoo jala oolchuu hime.
Oromiyaa keessatti hidhaan babal'achuun himame
Itoophiyaan mala duraan miidiyaa ittiin ukkaamsaa turtetti deebi'aa jirti kan jedhu CPJ'n, 'yaalii fonqolchaa' raawwatame jedhame hordofuun intarneetiin guutummaatti adda cituu isaa qeeqeera.
Intarneetii adda kutuu qofa osoo hin taane gaazexeessitoonni lama labsii farra shororkeessummaa mirga namaa ukkaamsu jalatti hidhamuu isaaniis ni qeeqa.
Intarneetii adda kutuu fi gaazexeessitoota labsii kanaan himachuun miidiyaa ukkaamsuuf yaaluun Itoophiyaa keessatti waan haaraa miti jedha CPJ'n.
Haa ta'u malee MM Abiy Ahimad jijjiirama gama walabummaa miidiyaan argamsiisaniifi hawaasa idil-addunyaa biraa beekamtii itti argataniin faallaadha jedheera.
Hidhamuun gaazexeessitootaa walabummaa miidiyaa erga MM Abiy Ahimad aangootti dhufanii daran fooyya'ee ture balaaf saaxila kan jedhe ammoo dhaaba mirga namoomaaf falmu 'Amnesty International' dha.
Mootummaan gaazexeessitoota hidhe hatattamaan gadi dhiisu akka qabus gaafateera.
Dubbi himtuun Waajjira MM Billanee Siyyuum mootummaa 'yaalii fonqolchaa' raawwateen wal qabatee namoota hojii fi ogummaa adda addaa qaban hedduu to'annoo jala oolchee qorata jira jechuun CPJ'f deebii kennaniiru.
Gaazexeessitoonni hidhaman jedhame "sochii gaazexeessummaan kan wal qabate miti" jedhanii mootummaan ammas walabummaa miidiyaa mirkaneesuuf kutannoo jabaa qabaachuu himaniiru.
Raayyaan Ittisa Biyyaa gaazexeessitootaa fi miidiyaalee "raayyaa ittisaa fi uummata gidduu wal amantaan akka hin jirre uuman nan himadha" jechuun isaa walabumma miidiyaa miidhaa jennee ogeeyyii dubbisneerra.
"Walabummaan miidiyaa itti gaafatamummaa faana deema" kan jedhan ogeessi miidiyaa Obbo Dajanee Tasammaa, "nama dhunfaas ta'e dhaabbata maqaa xureessuu fi arrabsuun walabummaa miti" jedhu.
Walabummaan kun daangaa qaba, kana darbee waan raayyaan ittisa biyyaa hin goone godheera jedhee kan maqaa dhaabbatichaa balleesse himatamuun sirriidhuma jedhu.
Diinii koleejjii gaazexeessummaa fi Komunikeeshinii Yuunivarsiitii Finfinnee kan tura Dr. Abdiisaa Zara'aay garuu wantichi baay'ee yaaddessaadha jedhu.
"Osoo gochaan hin raawwatan ta'eellee, afaanumaan nan himadha jechuun walahbummaa miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba" jedhu.
"Gaazexeessitoonni fi namoonni miidiyaa keessa hojjetan akka sodaatan, yoon kana jedhe boru maaltu narra gaha jedhanii akka of gulaalan isaan taasisa" jedhu.
Gaazexeessitoota qofa osoo hin taane namoonni keessummaa ta'anii miidiyaa irratti afeeraman illee, fedhiin dhiyaatanii yaada isaanii bilisaan kennuu rakkatu jedhan.
Haa ta'u malee miidiyaan itti gaafatamummaan hin hojjetu yoo ta'e mootummaan tarkaanfii akkasii fudhachuuf ni dirqama kan jedhan Dr Abdiisaan miidiyaan itti gaafatamummaan hojjechuu qabu jedhan.
Haadha warraa B/J Asaamminaw irraa 'ragaan haaraa argamaa jira'